''मुलुकको ठूलो पार्टी बनाउन त्यत्रो खटियो, केही समय विश्राम लिन परेन ?'' - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
''मुलुकको ठूलो पार्टी बनाउन त्यत्रो खटियो, केही समय विश्राम लिन परेन ?''
शीर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी नतोकिँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन अस्तव्यस्त बनेको छ । ९ सदस्यीय सचिवालय बैठक बाहेक पार्टीका अन्य संगठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थायी समिति बनेपनि पार्टीका अधिकांश निर्णय सचिवालयले गर्न थालेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले तिव्र विरोध गरिरहेका छन् ।
भ्रातृसंगठन एकीकरण सम्बन्धी स्थानीय तहले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा पनि परिणाम देखिने गरि काम हुन नसकेको हो । पार्टी एकीकरणमा सक्रिय भूमिका खेलेका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेले पार्टी एकीकरण भएपनि अधिकांश नेताहरु भूमिकाबिहिन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ''यति ठूलो संगठनमा हुँदा पनि अधिकांश नेताहरु हात बाँधेर बस्नुपरेको छ, पार्टीमा कुनै भूमिका छैन । ''
स्थायी समितिका अर्का सदस्य घनश्याम भुसालले भने पार्टी पुरै अराजकता उन्मुख हुँदै गएको आरोप लगाउनुभयो । एकता सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावमा पाटीको सांगठनिक एकीकरण प्रक्रिया विवादमा अल्झिएको उहाँले बताउनुभयो । भुसालले व्यङ्ग्य गर्नुभयो, ''चुनावमा निरन्तर खटेर पहिलो पार्टी बनाइयो, केही समय विश्राम लिनु परेन ? ''
एकता सम्बन्धी मापदण्ड विपरित गएर कार्यदल बनाइदा समस्या भएको नेता भुसालको भनाई छ । स्थायी समिति सदस्य सुभास नेम्वाङले भने मंसिर पहिलो साता सम्ममा सबै जिल्लाबाट एकीकरण सम्वन्धी प्रतिवेदन आउने बताउनुभयो ।
स्थानीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सांगठानिक एकीकरण प्रक्रिया शुरु हुने बताउनुभयो । देशकै ठूलो पार्टीको सांगठनिक एकता अलमलमा परेपछि दोस्रो तहका अधिकांश नेताले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।